सुमार्गीको कम्पनीले नेपालको भलिबलमा गर्यो ठूलो लगानी, भलिबल संघलाई ४० लाख
नेपाली भलिबल इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम प्रायोजन भएको छ। शुक्रबार नेपाल भलिबल संघ एनभिए र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालीबीच आगामी दुई वर्षको लागि ४० लाख नगद सम्झौता भएको हो। नेपाल भलिबल संघका अभ्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले ४० लाखको सम्झौता भएको पुष्टि गरे। उक्त रकम एनभिएले आयोजना गर्ने एनभिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको लागि मात्र हुनेछ। राजधानीमा साइनिङ सेरेमोनीमा एनभिएका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालीका अध्यक्ष अस्मिता सुमार्गीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतापछि टेलिकलले एनभिएलाई दुई वर्षसम्म वार्षिक २० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ। शुक्रबारै टेलिकमले एनभिएलाई १० लाख नगदको चेक हस्तानतरण समेत गरेको छ। ुनेपाली भलिबलको लागि ४० लाख ठूलो प्रायोजन हो। यो सम्झौता सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। यो सहयोगको गुन अब हामी सुनले तिर्नेछौँ र सुन भनेको खेलाडी नै हो र अब खेलाडीले राम्रो खेल्नुपर्छ। सम्झौतापछि एनभिएका अध्यक्ष शर्माले भने। यसअघि गत वर्ष एभनिएले क्लब लिग च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग दुई वर्षका लागि २० लाखको सम्झौता गरेको थियो।
एनभिएका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले नेपाली भलिबल विकासको गतीतर्फ अगाडी बढिरहेको र यो सम्झौताले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। चन्दका एनभिए आँफै १० रोपनी भन्दा बढी जग्गा खोजेर भलिबलको कभर्डहल शिलन्यास गर्ने सोचमा रहेको समेत बताए।
चौथो एनभिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन दोस्रो साता
एनभिएले चौथो महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्बल लिग भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन १३ देखि १९ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्डहलमा सञ्चालन हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ १२ तथा महिलातर्फ ९ टिमको सहभागिता हुने महासचिव चन्दले बताए। उनका अनुसार यो प्रतियोगिता एनभिए क्लब लिगको लागि क्वालिफिकेसन भएको र सहभागि टोलीकव संख्या बढ्न समेत सक्नेछ।
यस च्याम्पियनसिपको उत्कृष्ट ८ पुरुष टिम तथा उत्कृष्ट ६ महिला टिम अर्को बैशाखमा हुने आरबीबी एनभिए नेशनल क्लब लिगमा छनोट हुनेछन्।
च्याम्पियनसिपको महिला र पुरुष दुवैतर्फको विजेताले नगद १ लाख ५० हजार हात पार्नेछन्। यस्तै दोस्रो हुनेले १ लाख तथा तेस्रो हुनेले ६० हजार प्राप्त गर्नेछन। यसैगरी दुवैतर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १५(१५ हजार हात पार्नेछन् भने विधागत उत्कृष्ट हुने ब्लकर, लिफ्टर, स्पाइकर, लिबरो, सर्भर र कोचलाई समान ५ हजार प्रदान गरिनेछ।
विश्वकप २०१८, फ्रान्स र बेल्जियम पुगे टप ४ मा, ब्राजिल र उरुग्वे भए आउट
कसले जित्ला विश्वकप ? फुटबलको महासंग्राममा क्वार्टरफाईनलका खेल शुक्रबारबाट
पेनाल्टीले गर्दा अर्जेन्टिना पराजित, फ्रान्सलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै सकियो समय !
हारेर पनि जित्यो जपानले, दोश्रो चरणमा पुग्ने एकमात्र एशियाली राष्ट्र बन्यो !
अघिल्लो पटकका च्याम्पियन जर्मन पराजित, विश्वकपको विजेतालाई हराएर कीर्तिमान राख्यो कोरियाले (watch video)
नाईजेरियालाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिना दोश्रो चरणमा, अब फ्रान्ससँग भिडन्त शनिबार
जन्मदिनमा मेस्सीले दिए खुशीको खबर, विश्वकप जितेर मात्रै सन्यास !